नली को उपयोग को लागी विशिष्टता
प्लास्टिकको नलीको भण्डारण कोठा कोठा शान्त, हावामा राखिएको र पर्याप्त सुख्खा हुनुपर्दछ। कुनै पनि हावा प्रवाह बिना + ° 45 डिग्री सेल्सियस माथिको उच्च परिवेश तापमानले प्लास्टिकको नलीको स्थायी विकृति निम्त्याउन सक्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि प्याकेज गरिएको रजमा पनि, यो तापमान प्रत्यक्ष सूर्यको किरणमा पुग्न सकिन्छ ....
कसरी पुरानो ड्राइभर सवारीको नली अभाव हुन सक्छ!
यदि तपाईं राम्रोसँग ड्राइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने, कार नली अपरिहार्य छ! त्यहाँ अटोमोबाईलमा सवारीसाधनको धेरै अनुप्रयोगहरू छन्, र मलाई विस्तारपूर्वक तपाईंलाई बताउन दिनुहोस्! के तपाई यस दृश्यसँग धेरै परिचित हुनुहुन्छ? एकातिर, जब गाडी नेभिगेसनले जटिल सडक अवस्थाको सामना गर्दछ, यो अक्सर t भन्दा अधिक गाह्रो हुन्छ।
२०२० मा चीनको अटोमोबाइल नली बजारको वर्तमान अवस्था र विकास सम्बन्धी विश्लेषण
अटोमोबाइल रबर नली अटोमोबाइल पाइपलाइन प्रणालीको मुख्य अंश हो, जुन मोटर वाहन, मोटरसाइकल, ईन्जिनियरि machinery मेसिनरी, खनन, धातु विज्ञान, पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग र अन्य धेरै क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। अटोमोबाइल नली होज उद्योगको मुख्य बजार क्षेत्र हो। अटोमोटिभ हो ...